Fulbaana 28, 2021
Aadde Adaanech Abebee Kantiibaa magaalaa ta’uun yeroo sirna kakuu geggeessan, Finfinnee, Fulbaana 28, 2021
Manni maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee har’a hundeeffamee jira. Kan haaraa hundeeffame bulchiinsi magaalattii aadde Adaanech Abebee kantiibaa gochuun filatee jira.
Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ta’uu dhaan miseenosta mana maree magaalattii 138n sagalee guutuun kan filataman aadde Adaanech Abebee, mana maree sana duratti hirbuu erga seenanii booda haasaa dhageessisaniin, manni maree haaraan kan hundeeffame filannoon akka hin geggeessamne gochuuf kan ture jiddu seeniinsa alaa dura dhaabbachuun adeemsa filannoo ta’eni jedhan.
Waggoota shanan itti aananiif carraa Finfinnee bulchuu kan argate bulchiinsi isaanii, damee qiyyaafata itti kennu ijoo keessaa, malaammaltummaa ittisuun tokko ta’uu kantiibaan kun tuqanii jiru.
Hawaasichaaf qormaata kan ta’e qaala’ina jireenyaa ittisuu gama ilaaleen hiyyeeyyii irratti hojii fuuleffatee fi dargaggootaaf hojii uumuu irratti qiyyaafati kan itti kennamu ta’uu aadde Adaanech ibsaniiru.
Manni maree haaraa hundeeffame, paartii badhaadhinaaf afaan yaa’ii ta’uun kaadhimummaan kan dhiyeesse, aadde Buzeenaa Alqaadir afaan yaa’ii, dubree Faayizaa Mahaammad itti aantuu afaan yaa’ii gochuun kan filate yoo ta’u filatamtoonni kunis hirbuu seenuun hojii jalqabaniiru.
Waxabajjii 14 bara 2013 filannoo geggeessameen boordiin filannoo kan ibse bakka bu’oota mana maree uummataa 425 keessaa barchuma 410 kan injifate jpaartiin badhaadhinaa bulchiinsawwan magaalaa fi naannoo hundeessuu kan jalqabe yoo ta’u, guyyoota hanga tokko booda immoo mootummaa federaalaa hundeessuuf qophii irra jira.